Ukuxazulula umbuzo - luhlobo luni lwenja ukuba lunomntwana, kufuneka ube nomonde okwaneleyo kwaye unomnqweno wokubandakanya kokubili umntwana kunye nenja, ke kukho amathuba ukuba xa ufumana inja kwintsapho, ubuhlobo phakathi kwenja nomntwana buya kuba yinyani kwaye buqine.
Kufuneka kuqondwe ukuba inja ayilona umntwana kwaye akufanele iphathwe njengabantwana. Inja iya kukhangela nje kwaye ingalindelanga ukuthobela kwayo. Nangona inja iphakathi kwabantu, iphila ubomi bayo beenja. Udinga ukumbonisa ukuba ububungakanani bakho kwaye "ungumkhokeli wepakethi".
Uxanduva lwenja njengelungu elitsha lentsapho ngoku ulala nawe. Uze uzibuze umbuzo, ingabe ulungele ukunikela ixesha lakho lokukhulula ekukhuliseni kwakhe kwaye uthanda inja kangakanani? Imbopheleleko yokunyamekela inja kufuneka ihlulwe phakathi kwamalungu entsapho, umntu kufuneka afundiswe ukuba amondle, ahambe naye. Oku kuya kwenza ukuba umntwana abe noxanduva kwaye uya kumenza okulungileyo.
Musa ukuvumela umntwana ukuba adlale nenja, njengentetho yokudlala, ukuhudula inja emva kwakhe njengemilenze, ukudonsa kwi-paws, ukudonsa kunye nokutshiza kwiindlebe. Kwanokuzola ekuqalekeni, inja inomonde omncinci kwaye inokutsalana kumntwana xa ifumana isabelo esilinde ixesha elide lokutya. Kunzima ukucebisa naluphi na uhlobo olufanelekileyo kwintsapho. Xa abantwana abancinci bekulungele ukuqala isigcawu, bayaba novelwano kumabhanqa abantwana.
Eyona nto ifanelekileyo kwintsapho kunye nabantwana inzala yezinja:
UCollie udlala nabantwana ngokuzithandela, uyabathanda, unomlingani onobungane. Uqeqesho olugqwesileyo.
Ukususela kumalusi waseJamani, "ama-nannies" amnandi atholakala, ayaziwa ngokuzinikela. Inja iyazibophelela ekuqeqesheni, kwimfundo kwaye ihlakaniphe kakhulu.
USt Bernard uyinja enzulu kwaye enomonde. Uyanelisekisa ngeendlela zobantwana.
Umthengisi wegolide othembekileyo kubantwana, umnandi kunye nohlobo oluhle.
INewfoundland inomonde kwaye inothando. Khusela umntwana kwiinkathazo ezahlukeneyo, kuba uziva nje ukuba umntu unenjongo embi.
ULabrador unesigulane, inzolile kwaye inobungane, inika abantwana ukuba "badlale" nabo.
I-Mittelschnauzer ithanda ukutshintsha imidlalo, inzulu, inamandla, ingqiqo. Kuya kuba ngumkhuseli womntwana wakho, kubantu abangaziwayo bayaziqaphela.
I-poodle inja enenxaxheba kakhulu. Ukuba ungatsho njalo, ke le nja ifumana ulwimi oluqhelekileyo nabantwana.
I-Spaniel inja encinci, inja ezinikeleyo neyalinganisayo ethanda abantwana.
Ekugqibeleni, xa ubuzwa ukuba luphi uhlobo lwenja yokufumana umntwana, ndingathanda ukutsho ukuba njengommiselo, nayiphi inja oyiqhubayo iya kuba mnene kunye nabanini kunye nabantwana ukuba bayayikhathalela kwaye bayayithanda.
Tart nge tshokoleta kunye neerberberries
Yintoni eyenza ukuphuphuma kwesisu ngokukhawuleza?
I-Horoscope yeveki ka-Oktobha 9-15 kuzo zonke iimpawu ze-zodiac
Umfazi wokuqala kaDmitry Tarasova uhleka u-Anastasia Kostenko, ividiyo
Imifanekiso eyaziwayo Yasmin Gauri
Kutheni umntwana engabi niselo?
Isikhumba njengempendulo yokukhusela yomzimba